ဆရာမ ။ ။ ကဲ သားသားတို့ မီးမီးတို့ ဆရာမမေးခွန်းလေးတွေမေးမယ် လိုက်ဖြေကြနော်
ကလေးများ ။ ။ ဟုတ်ကဲပါ ချာမ
ဆရာမ ။ ။ ကဲ ပထမဆုံးမေးခွန်းမေးမယ် တရားပွဲသွား တရားနာရင် ဘာဖြစ်မလဲ ။
ကလေးများ ။ ။ လူသတ်ချင်ပါတယ် ချာမ
ဆရာမ ။ ။ ဟဲ့ ပလုတ်တုတ် ဘယ့်နှဲ့ လူသတ်ချင်တာတုန်း
ကလေးများ ။ ။ ဟုတ်ပါတယ်ချာမ တနေ့က တားတားဖေကြီး
လူသတ်ချင်တယ်လို့ ပြောပါတယ် ချာမ
ဆရာမ ။ ။ ဟယ် မဟုတ်တာ နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ် လုပ်ပါကွဲ့ .. ကဲကဲ အာ့ဆို နောက်တစ်ခုဖြေ
တရုတ်နိုင်ငံက ဆရာမတို့နိုင်ငံရဲ့ ဘယ်ဘက်မှာရှိသလဲကွဲ့
ကလေးများ ။ ။ အလယ်ပိုင်းမှာပါ ချာမ
ဆရာမ ။ ။ ဘယ်ကအလယ်ပိုင်းရမှာလဲ အရှေ့ဖက်မှာပါကွဲ့
ကလေးများ ။ ။ ဟာဂျာ ချာမကလဲ မန်းရေးက တားတို့နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းဟုတ်ဘူးလားလို့
ဆရာမ ။ ။ ဟင် !! ကဲပါ နောက်တစ်ခုဖြေ .. ယိုးဒယားကိုသွားသိမ်းခဲ့တာ ဘယ်သူတွေလဲကွဲ့
ကလေးများ ။ ။ မြန်မာအိမ်ဖော်တွေပါ ချာမ
ဆရာမ ။ ။ ဟဲ့ ဘယ်က မြန်မာအိမ်ဖော်တွေတုန်း
ကလေးများ ။ ။ ဟုတ်ပါတယ် ချာမ တားတားတို့ မမ အဲ့နိုင်ငံမှာ အိမ်ဖော်သွားလုပ်တာ
ပန်းကန်တွေသိမ်း အိပ်ယာတွေသိမ်း အမှိုက်တွေသိမ်းရပါတယ်ချာမ အဲ့ဒါ
ဆရာမ ။ ။ ဆရာမမေးတာ အဲ့လိုဟုတ်ပါဘူးကွယ်... တော်ပြီ တော်ပြီ... ဒီတခါ
သင်္ချာမေးခွန်းလေးမေးမယ် သစ်တစ်ပင်ခုတ်ရင် ထောင်ဘယ်နှနှစ်လဲကွဲ့
ကလေးများ ။ ။ သုံးနှစ်ပါ ချာမ
ဆရာမ ။ ။ ကဲ အာ့ဆို အပင် တစ်သိန်း ခုတ်ရင်ရောကွယ်
ကလေးများ ။ ။ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆု ရပါတယ် ချာမ
ဆရာမ ။ ။ ဒါက ဒီလိုရှိတယ်လေကွယ် ကဲ ထားပါတော့ ထားပါတော့ ... ဆရာမတို့နိုင်ငံမှာ
ကလေးများ ။ ။ သူခိုးတွေပါ ချာမ
ဆရာမ ။ ။ ဟဲ့ သဘာဝ သယံဇာတတွေ လုပ်ပါကွယ်
ကလေးများ ။ ။ အဲဒါတွေက ခုန သူခိုးတွေ ခိုးလို့ ကုန်တွားပါပြီ ချာမ
ဆရာမ ။ ။ ဟင် (ဟုတ်သလိုလိုဘဲ ဟဲ့ ) သားသားတို့ မီးမီးတို့ အမျိုးဘာသာကို ချစ်ရင်
ကလေးများ ။ ။ ကုလားကို အော်ဆဲရပါမယ် ချာမ
ဆရာမ ။ ။ ဟဲ့ ဘယ်ကဟုတ်ရမှာလဲကွယ်
ကလေးများ ။ ။ ဟုတ်ပါတယ် ချာမ ဟိုတလောက မြို့လယ်ခေါင်မှာ တုတ်တွေ ဓားတွေကိုင်ပြီး
ကုလားတွေကို ဆဲနေကြတာ အဲဒါ တားဖေဖေကိုမေးကြည့်တော့ အမျိုးကို
ချစ်လို့ ဆဲနေကြတာပါတဲ့ ချာမ
ဆရာမ ။ ။ ကဲ... တော်ပြီ တော်ပြီ နောက်ဆုံးတခုဘဲ မေးတော့မယ် ဒီတခါ
မှန်အောင်ဖြေကြနော် ဘုရား တရား သံဃာ အပြင် တခြား ဘယ်သူတွေကို
ကလေးများ ။ ။ နိုင်ငံဒေါ် ပါ ချာမ
ဆရာမ ။ ။ ဟဲ့ ဘယ်က နိုင်ငံတော်က ပါလာရတာတုံး မိဘရယ် ဆရာရယ် မဟုတ်ဘူးလားဟဲ့
ကလေးများ ။ ။ မိဘ ဆရာ မကြည်ညိုလို့ ဘာမှ မလုပ်ပါဘူး ချာမ နိုင်ငံဒေါ်က သူ့
မကြည့်ညိုရင် ထောင်ထဲ ထည့်ပါတယ် ချာမ
ဆရာမ ။ ။ သေစမ်းဟဲ့ ရပ်ကွက်လူကြီးတွေ
Credit - Dino Ranger
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/31/20150အကြံပြုခြင်း
အမှုပေါင်း ၃၈ မှုနဲ့ အပြုံးမပျက်တဲ့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် နန္ဒာစစ်အောင်
ယနေ့ အမှုပေါင်း ၃၈ မှုနဲ့ အပြုံးမပျက်တဲ့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်
နန္ဒာစစ်အောင် ( မင်္ဂလာဒုံရဲစခန်း )
သတင်းဓာတ်ပုံ-Aung Aung Kyaw
တတိယမြန်မာနိုင်ငံကို တည်ထောင်ခဲ့သော အလောင်းမင်းတရားကြီး အုတ်ဂူ
rKyi Tha Maw
မွန်ပြည်နယ်၊ ဘီးလင်းမြို့နယ်၊ ကင်းရွာရှိ တတိယမြန်မာနိုင်ငံကို တည်ထောင်ခဲ့သော အလောင်းမင်းတရားကြီး အုတ်ဂူအား 2014 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၈)ရက်နေ့ တွေ့ရစဉ်။
(လိုက်လံ ပြသပေးသော ညီမငယ်တစ်ဦးအား ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ပါသည်။)
မြန်မာ အစိုးရ သို့FNG မှ ဒုတိယ အကြိမ်မြောက် အိတ်ဖွင့်စာဖြင့် သတိပေး
၂၀၁၅ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂ ရက် နေ့မြန်မာ စံတော် ချိန် နံနက် ၁၁ နာရီ
နောက် ဆုံး ထား ပြီး ဖမ်းဆီး ထားသည့် ကျောင်းသား
များ ကို ပြန်လည် လွှတ်ပေး ခြင်း မပြု လျှင် အမေရိကန် နိုင်ငံ ကာလီဖိုနီးယား ပြည်နယ် မှာဖခင် နာမည် ရင်း မဟုတ် တဲ့ နာမည် ၀ှက် တွေ နဲ့တက်ရောက် နေတဲ့ မြန်မာ အစိုးရ အရာ ရှိ တွေ နဲ့စစ်တပ် အရာရှိ တွေ ရဲ့ သားသမီး အမည် တွေ နဲ့တက်ရောက် ပညာသင်ကြား နေတဲ့ တက္က သိုလ် တွေ ကို FNG က ထုတ် ပြန် ကြေငြာ သွား မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/30/20150အကြံပြုခြင်း
နန္ဒစစ်အောင်ကို တင်ဆောင်ထားတဲ့ မင်္ဂလာဒုံဘက်ကို ဦးတည်မောင်း
ဗကသ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ နန္ဒစစ်အောင်ကို ကနေ့မနက် ၁၀နာရီ ကမာရွတ်တရားရုံးမှာ ရုံးထုတ်မယ်လို့ ဆိုတာကြောင့် မိသားစုဝင်တွေ က စောင့်ဆိုင်းခဲ့ကြပါတယ်။ နေ့လည် ၁၂နာရီကျော်ထဲအထိ ကမာရွတ်တရားရုံးကို နန္ဒစစ်အောင်ကို တင်ဆောင်ထားတဲ့ ကားရောက်မလာပဲ မင်္ဂလာဒုံဘက်ကို ဦးတည်မောင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ နန္ဒစစ်အောင်ရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူ ဟာ သားဖြစ်သူကိုတင်ဆောင် ထားတဲ့ကားနောက်ကနေ ထပ်ချပ်မခွာလိုက် ပါနေပြီ လက်ပံတန်း တရားရုံးကို ခေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
Author/ photo- စရာဇာအောင်
ဗကသကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုနန္ဒာစစ်အောင် အား သာယာဝတီထောင်သို. ပို.ဆောင်လိုက်ရာ ညနေ ၅ နာရီခန်.တွင် ရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
. သတင်းဓါတ်ပုံ-Ko Kyawnaing Oo
ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် မြင့်ဆွေ အမှိုက်ကောက်နေတယ်။ ခေါ်လိုက်ပါ။
စုပုံချစ်ကို ထူးချွန်အောင် အစိုးရကပဲ ရှာဖွေဖော်ထုတ်ထောက်ပံ့ထားသလိုလိုနဲ့ဗျာ
ဆရာရဲမြလွင် ၂၀၀၀ တုန်းက ဘာသာပြန်ပြီး
ခြေလက်မဆုံပဲ ထူးချွန်တဲ့ ဂျပန်လူငယ်အကြောင်းရေးထားတဲ့
စာအုပ်ကို ဖတ်မိတဲ့ စုပုံချစ်ရဲ့ မိဘနှစ်ပါးရဲ့ပေးစာကနေ
မသန်တဲ့သမီးလေးကို စာတော်ထူးချွန်ပြီး စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာအောင်ပျိုးထောင်ထားတာကို
Japan က Foundation တွေသိပြီး ကူညီရာက
၂၀၀၂ ကနေ ၂၀၀၆ အထိ လှိုင်သာယာအပါအဝင်
Worldvision Myanmar တံဆိပ်ကလေးတွေ အထင်းသားပါ
ဘယ်လူကြီး ဘယ်ဝန်ကြီးရဲ့ ပိုက်ဆံတပြားပါသလဲ
အစိုးရက နေစရာပေးလို့ စုပုံချစ် ပညာတတ်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး
Master Plan တွေကို ဘယ်သွားထားမလဲဗျာ
ခွန် ဂါမဏိ Wrote·(30-3-2015)
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/29/20150အကြံပြုခြင်း
အမှုပေါင်း ၃၈ မှုနဲ့ အပြုံးမပျက်တဲ့ ကျောင်းသားခေါင်း...
တတိယမြန်မာနိုင်ငံကို တည်ထောင်ခဲ့သော အလောင်းမင်းတရာ...
မြန်မာ အစိုးရ သို့FNG မှ ဒုတိယ အကြိမ်မြောက် အိတ်...
နန္ဒစစ်အောင်ကို တင်ဆောင်ထားတဲ့ မင်္ဂလာဒုံဘက်ကို ဦးတ...
ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် မြင့်ဆွေ အမှိုက်ကောက်နေတယ...